Indawo yokuhlala eLahnhof, iLaces
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBelvilla AG
Indlu entle enendawo yokuqubha ekhangayo, ejikelezwe ziigadi ezininzi zeziqhamo kunye nohlaza. Ukwindawo ezolileyo, enelanga kanye ekungeneni eGoldrain, isithili saseLatsch esiziimitha ezingama-650 ukuphakama eVinschgau. Ujikelezwe yindawo ekhethekileyo yeentaba, ungaphumla echibini kwaye kwangaxeshanye ujabulele umbono omangalisayo wehla entlanjeni. Iishawari ze-adventure kunye nendawo yokuphumla ibonelela ngokuphumla. Ngelixa iindwendwe ezincinci zikhulula umphunga kwindawo yokudlala, phumla kwi-sauna (ngomrhumo) okanye kwenye yeendawo zokuphumla zelanga kunye nezinto zokufunda ezinomdla. Indawo yokuhlala yaseLahnhof inesiza esibhalisiweyo sokumisa inqwelomoya, apho unokumisa eyakho inqwelo-ntaka xa uyicelile.
Iinkcukacha: Iindleko zamandla ezisekelwe kusetyenziso, ilinen yokulala, iitawuli, ukucocwa kokugqibela, iWiFi
Imisebenzi ekufutshane: Ukuloba kwidolophana - echibini lokuloba, i-1 km
Ayifanelekanga kubantu abanokuhamba okuncitshisiweyo
Uyilo: Ikhitshi (itafile yokutyela, ihob(2 izitovu zeringi, iceramic), itoaster, umatshini wekofu, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya), Indawo yokuhlala/ibhedi (ibhedi ephindwe kabini, iTV(satellite)), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ishawari , indlu yangasese, isomisi enwele), ibalcony, igadi, ifenitshala yegadi, i-BBQ, indawo yokupaka, iparasol, isilayidi, iSwing set, ibhedi yomntwana(mahala)
Umbuki zindwendwe ngu- Belvilla AG